Amber Rose achifungisisa kudzikiswa kwemazamu - Nhau
Kuru Style Macelebs Nhau Varaidzo
Amber Rose achifungisisa kudzikiswa kwemazamu
Amber Rose iri kutarisa kudzikira kana zvasvika kumuviri wayo wepamusoro.
Iyo modhi yakaenda kuna Instagram muna Chikunguru 31 kuratidza kuti ari kupa pfungwa yakakosha yekuita kuti mazamu ake aderedzwe.
'Ndiri kufunga nezvekudzikiswa zamu gore rino,' iye akanyora padhuze nepikicha yazvino yekuratidzika kwake zvakanyanya. 'Maboobs angu akapusa anorema, musana wangu unorwadza uye handigone kupfeka akanakisa lil shati ndisina gogo bhurugwa. Ndirikutya chaiko nemavanga emalollipop tho. '
Ndiri kufunga nezvekudzikiswa zamu gore rino maboobs angu akapusa anorema, musana wangu unorwadza uye handigone kupfeka akanaka mahembe lil lil ndisina gogo bra. Ini ndiri chaizvo kutya lollipop mavanga tho…. chero zano? Kune here chero vakadzi kunze uko vanofara zvakanyanya kunyangwe iwe uine mavanga ekuderedza mazamu? Uye kwete ini handina maimplant saka ivo havagone kungocheka kutenderedza minyatso ndiudze nezve ur zvakaitika - muva
Chinyorwa chakagovaniswa na Amber Rose (@amberrose) pana Jul 31, 2017 na10: 30 am PDT
Iye akabva amubvunza iye anosvika mamirioni gumi nematanhatu evateveri ve Instagram kana vaine zviitiko zvakafanana kana kurairwa.
'Kune vamwe vakadzi kunze uko vanofara zvakanyanya kunyangwe iwe uine mavanga ekuderedza mazamu?,' Akabvunza. 'Uye aiwa ini handina ma implant saka havakwanise kungocheka paminyatso kundiudza nezve ur zviitiko.'
Chiziviso chinogona kuuya sechishamiso chidiki kune vazhinji, tichifunga kuti Amber anozivikanwa kuratidza muviri wake mune dzakawanda nzira dzeNSFW. Mwedzi wapera, akaratidzira kuchenesa kwake kwakakwana apo aikurudzira Sneaky Vaunt Backless bra, iyo yakagadzirirwa kuwedzera kuchenesa.
'Cleavage, manhamba, zvinwiwa kubhawa, unowana ZVESE izvo uyezve kana iwe ukapfeka uku kusundidzira kumusoro,' akadaro.
Muna 2015, akaonekwa pane pfupi-epurasitiki yekuvhiya show 'Basa Rakanaka' uye akataura pachena nezve mazamu ake.
'Ini ndinopfeka 36H, zvakasikwa,' akadaro panguva iyoyo. 'Handizive kana ndichida kuiswa nekuti mabhuti angu akanaka chaizvo.'
Rob Kardashian anoramba kushungurudza Blac Chyna mumatare matsva kumatare
Rob Kardashian anopomera Blac Chyna wekubiridzira, kushandisa zvinodhaka uye kudhakwa mu Instagram tirade
jackie orenji ndiyo nhema nyowani
Laura spencer achiri pa gma
ko Janet jackson akatumidza mwanakomana wake zita rei
mutongi joe brown achiri akaroora
nikki bella kubatanidzwa mhete mutengo
khloe kardashian bvudzi idzva rakatemwa